Guddoomiyihii Gobolka Awdal ee Somaliland oo Iscasiley • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Guddoomiyihii Gobolka Awdal ee Somaliland oo Iscasiley
Guddoomiyihii Gobolka Awdal ee Somaliland oo Iscasiley
Waxaa maalintii labaad ka socda xarunta gobolka Awdal ee Boorame mudaaharaadyo waaweyn oo looga soo horjeeda qaabka uu dawladda u dhisey Madaxweynaha cusub ee Somaliland Axmed Siilaanyo.
Ciidamo xooggan oo ka tegay magaalada Hargeysa si ay u demiyaan rabshadaha ayaa bilaabey in ay xiraan dadka mudaaharaadaaya waxaana lagu soo waramayaa in dad badan la qabtey kuwaas oo ka mid ahaa dadkii mudaaharaadaayey.
Guddoomiyihii Gobolka Awdal Maxamuud Cabdullaahi Cige ayaa maanta shir saxaafadeed uu qabtey daaha ka qaadey in uu xilkii iska casiley, Guddoomiyaha ayaa sabab uga dhigey arintaas kadib markii ciidankii ka yimid Hargeysa ay u sheegeen in ay amar ku qabaan in aysan isaga ka amarqaadaan xitaa Taliyaha Booliska Gobolka Awdal aysan ka amar qaadanayn, waxaana uu sheegay in arintaasi ay tahay mid qaynuunka ka baxsan.
Beesha degta gobolka Awdal ee uu ka soo jeedo Madaxweynihii hore ayaa u aragta in qaabka Siilaanyo wax u qaybiyey ay tahay mid aan la aqbali karin, dadka qaar ayaa sheegaya in Madaxweynihii hore ee Somaliland Daahir Rayaale Kaahin aan laga dooran Gobolka Togdheer doorashadii 2003-dii sidaas oo ay tahay uu xaqii ay iska lahaayeen reer Togdheer uu siiyey, maantana Siilaanyo waxa uu wadaa ay tahay aargoosi iyo laygama dooran Boorame.
Madaxweynaha cusub ee Somaliland ayaan weli ka hadal mudaaharaadada lagu diidan yahay qaabka uu u dhisey dawladdiisa, waxaana uu horey u sheegay in uu soo dhisaayo dawlad kooban oo tayo leh.